Oliver "Tuku" Mtukudzi : Sekuru's Stories Oliver "Tuku" Mtukudzi : Sekuru's Stories
VanaTuku vakabva nemuDande, vanaChangachirere vacho. Ehe, vakabva muDande, muZambezi Valley. Kare, vese vaiera Nzou Samanyanga vaigara muDande. Vamwe vaigara kuMuzarabani, asi yaingove Dande.
Isusu tateguru vedu ndovaive mambo. Saka vakativo nzvimbo ino iyi iDandemutande, kubva muHunyani, tichidzika tichetevedza Zambezi Valley yese, kunosvika kuMozambique, ndobva vati Dandemutande, kureva kuti rakangotandira, ivalley inongoenda kusvika kuMozambique. Yakangoita sespiderweb. Saka kuti Dande, pane rwizi runonzi Dande rwiri padhuze nepaGuruve pacho. Saka vanhu havana kuzotora kuti Dandemutande, vakanga vava kudimbura vava kungoti Dande. Asi irwizi, Dande irwizi. Saka Dande, kungodimbura izwi racho, kudimbura, ehe. Asi area yacho yese iDandemutande.
Saka vakazobva kuDande, kuLower Guruve, ndobva vauya kuzogara kuUpper Guruve, kuNyagavi. Ehe, kuriko kunonzi kuNyangavi. Tikabva paGuruve, todzika tichinanga side riri kumadokero, toyambuka kakova kanonzi Shinje. Takwidza, toenda panonzi paNyangavi. Ndokunzvimbo kwavo kwavaigara nokuti kuDande kwainetsa mvura. Mvura yekunaya, vanhu vekuDande vaigara vachiuya kwatiri kuno uku, vachitsvaga chikafu, ehe. Saka ivo nokuona kuti tikagara kuno uku, tingatouraya mhuri nei? Nenzara, ndobva vatamira kuno kuGuruve kunonaya mvura maningi. Ndobva vava kugara kuno uku, vachirima.
Ndobva vatamira kuMadziva. Saka kuMadziva, ndokwavava kugara iye zvino izvi, tichienda kuDarwin. Asi vamwe vavo vese vazhinji vakasara kuGuruve. Ndopavakazobva, voenda kuMadziva. Nokwakabva baba vaTuku. Vaisevenza muno muHarare munoumu, vachigara kuOld Highfield umomo.
Dzimbo Dziri MuChivanhu
Dzimbo dzake totodziimba, dzoridzwa pangoma. Asi kana tava kuita maceremonies aya atinenge tava kuita, ritual, tinenge tisapinde pai? Pamaguitar. Tinenge tava kuridza chii? Ngoma chaidzo. Inenge yava kurira yava ngoma, ehe.
Saka ndomafambisiro aakazviita manje, nokuti haana kurasa tsika. Haana kurasa tsika, akangogara aine tsika yacho. Culture ari kuda kuichengetedza, nokuti sekubvunza kwauri kuita, kana iri culture zviye zviye, wotozonzwa munhu achikutaurira kuti zvakamira zvakati, zvakati, zvakati, semataurira andiri kuita aya. Wotobva wangoziva kuti ndezvei? Iritual. Saka ndomamairiro azvikaita. Dzimbo dzake dzese dziri muchivanhu.
“Rova Ngoma Mutavara”
Tikatora dzimbo dzaanenge achiridza dziya dziya, “Rova Ngoma Mutavara,” dzinoridwa pangoma. Saka iye akazodzitora manje, ndobva adziisa paguitar, asi anenge achitoimba traditional. Hazvisiyane, anenge achiimba traditional. Zvino, kuzoisa kumaguitar kuitira kuti vadiki nevakuru, vese vanogona kuteerera music yake. Nokuti kana achiimba “Rova Ngoma Mutavara,” ini ndobva ndafungawo ngoma. Mwana mudikiwo, kana iye achiimba kuti “Rova Ngoma Mutavara” achiridza guitar, mwana mudiki anonakidzwa nei? Neguitar.
Saka akavatora ndokuvabatanidza vese, nokuti akaridzira pavakuru, vanonakidzwa. Akaridzira pavana vaduku, vanonakidzwa. Ehe, ndozvakaita kuti aimbe dzimbo dzetraditional dziya dziya. Dzese dzimbo dzake dzaanoimba, zhinji dzacho, dzinoridzwa pangoma. Zvokuti kana tiri kuGuruve uko, tinotoimba tichidaro futi, kuti “Rova Ngoma Mutavara.”
“Rova Ngoma Mutavara” inoridzwa manje pamangwingwindo, ehe, inoridzwa ipapo. Pangoma vamwe vanoti dandanda, vamwe vanoti mangwingwindo, vamwe vanoti dinhe, asi iri ngoma imwe chete. Zvinoenda nenzvimbo inogara vanhu. Tikaenda kuChiweshe, vanoti dandanda. Tikaenda kuGuruve, vanoti mangwingwindo. Tiakenda kuMashonaland West, kuHurungwe, vanoti dinhe, asi ingoma imwe chete. Kana vachiimba, vanoimba imwe chete, ngoma inoridzwa zvimwe chete, hazvisiyane. Dzimbo dzese idzodzo dzinoimbwa naTuku, zhinji dzese dziya dziya dzinoridzwa padandanda, mangwingwindo, nedinhe.
Sekuru Chigamba vanoridza “Bwanyamakaka” pambira dzavo
Mangwingwindoka, kunoridzwa futi “Bwanyamakaka” manje, ehe. Kana kudandanda futi kunoridzwa “Bwanyamakaka,” kana kudinhe. “Bwanyamakaka,” munhu anouya achiita sekutyisidzira, kana kuti tingangoti intimidation, asi isina kuita serious. Inoita kuti vanhu vatye, vatadze kubvunza zvavari kuda, nokuti unenge uri mukuru. Kana wauya, unouya uchityisidzira vana, saka vana havazokwanisa kudii? Kusununguka kuti vabvunze zvavanoda. Unenge wavatyisidzira. Saka vana avo manje, vanozoita dimikira. Havazoda kubuda pachena kuti vakuudze kuti ndozvawatiita. Vanokuimbira rumbo, “Iwe mukuru wanyanya, mukuru, bwanyamakaka.” Saka iwe wozoziva kuti, “Oh, ndakanganisa, nhai? Apa ndauya ipapa, ndauya ndichikanganisa. Saka vana ava vava kunditaurira manje kuti inini ndakanganisa. Ehe, kukanganisira vana vaduku.” Ndomamiriro azvikaita. Saka dzimbo dzedu isusu, dzinenge dzichitaura. Kazhinji dzinodzidzisa, dzinotsiura. Kutsiura, kutaurira munhu kuti zvawaita zviya zviya, hazvina kunaka. Kutsiura kwadzinenge dzichiita, dzinenge dzichiitira kuti iwewe uzive kuti zvawaita wakanganisa, asi zvinenge zvichibva parumbo, ruchiimbwa.
Pane dzimwe dzimbo dzokuti, anongotaura zviri munzvimbo, munharaunda, achitaura dzinodzidzisa vanhu. Zvaanenge achitaura zvinenge zvichitodzidzisa vanhu kuti vanhu vanofanira kuita zvakati, vanofanira kuita zvakati. Sezvakaita “Dzoka Uyamwe.” Nokuti iye Tuku aita semunhu agarisa kuMadziva, asina kudzokera kupi? Kunoona vakasara kuDande. Saka oti, “Inini ndafunga Dande. Saka ndakumbodzoka kuti ndiwane mhepo itsva.” Kutaura kuti ndiwane mhepo itsva kana ndasvika uko, ndombochinjawo mhepo manje. Midzimu yese iriko kuDande uko, saka ichamudii? Ichamukomborera pane zvaanoita.
Hakusi kureva kuti unoenda kunoyamwa, amai vacho kuti ndava kuyamwa. Apo rinenge riri dimikira kuti, kana wagairsa kune imwe nzvimboka, unofanira kumbodzokera kumusha, midzimu yombokuonawo. Ndokuyamwa kwacho ikoko. Nokuti kana mudzimu waamai wako uriko, kana mudzimu wababa vako uriko, woendawo kunombodii? Kunombopiwa mhepo itsva, woenda wava nemhepo yakanaka. Wasvika kumusha kuya kuya, mudzimu unoti, “Ha, wadzoka kumusha,” yokufarira, yokufarira, yokufarira, kuti, “Ah, mwena wedu ari kutiziva.” Saka, kana wozodzoka zvako iwewe, unenge wava nemablessings matsva. Ndosaka tichiti mhepo itsva, ehe. Mhepo itsva, kureva kuti vadzimu vanokubatawo zvakanaka, voziva kuti mwana adzoka kumusha.